Izindaba - Ezinye izithombe zokuthunyelwa kwakamuva
Ezinye izithombe zokuthunyelwa kwakamuva
YixingI-Holly Technology iyisandulela sasekhaya ekukhiqizeni izinto zemvelo kanye nezingxenye ezisetshenziselwa ukuhlanza indle.
Ngezansi kukhona ezinye izithombe zokuthunyelwa kwakamuva:imidiya ye-tube selttler kanye nemidiya yesihlungi se-bio
Ngokuhambisana nomgomo weKhasimende kuqala”, inkampani yethu isithuthuke yaba ibhizinisi elihlanganisa ukukhiqiza, ukuhweba, ukuklama kanye nokufaka insizakalo yokufaka imishini yokuhlanza indle.Ngemva kweminyaka yokuhlola nokwenza, sakhe uhlelo lwekhwalithi oluphelele nolwesayensi kanye nohlelo lwesevisi oluphelele ngemva kokuthengiswa.Okwamanje, ngaphezu kuka-80% wemikhiqizo yethu ithekelisa emazweni angaphezu kuka-80, okuhlanganisa iNingizimu-mpumalanga ye-Asia, i-Europe, iNyakatho Melika, I-Latin America, Afrika .. Iminyaka eminingi, siye sazuza ukwethenjwa kwamakhasimende ethu amaningi futhi samukelwa ekhaya naphesheya.
Imikhiqizo yethu emikhulu ihlanganisa: I-Dewatering screw press, i-Polymer dosing system, i-Dissolved air flotation(DAF) system, i-Shaftless screw conveyor, isikrini sebha ye-Machanical, isikrini sesigubhu esijikelezayo, isikrini sesinyathelo, isikrini sesihlungi se-Drum, i-Nano bubble generator, i-Fine bubble diffuser, i-Mbbr bio imidiya yokuhlunga, imidiya ye-Tube settler, i-Oxygen generator, i-Ozone generator njll.
I-Tube settler ifaneleka kakhulu kuzo zonke izichazi ezihlukene nokususa isihlabathi.Kuthathwa njengemishini yokuhlanza amanzi emhlabeni wonke ekuhlinzekeni amanzi kanye nobunjiniyela bokuhambisa amanzi.Inokusebenza okubanzi, ukusebenza kahle kokuphatha, indawo encane, njll. Ifaneleka ekukhipheni isihlabathi endaweni yokungena, imboni kanye nemvula yamanzi okuphuza, ukuhlukaniswa kwamafutha namanzi.
Idizayini ye-modular kanye ne-cubical ezisekelayo ye-Honeycombed Inclined Tube Settlers isiza ukuphatha ngesikhathi sokufakwa kanye nanoma yikuphi ukulungiswa okulandelayo.
I-1mm ye-PP emnyama i-lamella clarifier tube settlers imidiya yokwakhiwa kokuhlanza amanzi endle igwema ulwelwesi oluncane lwezindonga futhi isebenzisa amasu okwakha ukuze kuncishiswe ingcindezi yengxenye kanye nokukhathala kokuphazamiseka kwemvelo okulandelayo.
I-1mm ye-PP emnyama i-lamella clarifier tube settlers imidiya yokuhlanza amanzi endle inikeza indlela engabizi yokuthuthukisa izihlanzi ezikhona zokuhlanza amanzi kanye nemicengezi yokuthungula ukuze kuthuthukiswe ukusebenza.Bangakwazi futhi ukunciphisa umthamo/unyawo oludingekayo ekufakweni okusha noma bathuthukise ukusebenza kwezitsha zokuhlalisa ezikhona ngokunciphisa ukulayishwa okuqinile kuzihlungi ezingezansi.
Isikhathi sokuthumela: Jan-07-2022